China LH-BM220L 1-3 Layers Ugboro Abụọ Mgbanaka Chemical Drum Blow Molding Machine Nrụpụta na Ụlọ Ọrụ |Luhong
LH-BM220L 1-3 N'ígwé Ugboro Abụọ Mgbanaka Chemical Drum Blow Molding Machine
Igwe igwe na-akpụ akpụ kemịkalụ 220L nwere ike iwepụta PE & HDPE kemịkalụ kemịkalụ site na 200L ruo 220L, 1-3layers.
Oge nnyefe: 60-90 ụbọchị
Oge ịkwụ ụgwọ: 30% ịkwụ ụgwọ ogologo oge site na T / T, a ga-akwụ ụgwọ T / T ma ọ bụ L / C tupu nnyefe.
1.Double Ring Chemical Drum Blow Molding Machine nkọwa
Moto extrusion na igbe gia na-enye ike maka ịghasa.Ka ọ dị ugbu a ịghasa na gbọmgbọm nwere ihe siri ike, jide n'aka na ị na-eme plastik nke ọma, ihe ọkụkụ seramiiki nwere ọrụ kpo oku na ngwa ngwa!
Ụdị mkpokọta, mkpochapụ ihe na nke mbụ na usoro mbụ pụta.Ọkachamara injinia anyị mere ihe owuwu isi, ọ kwụsiri ike na ngwa ngwa.Jiri njikwa parison maka ịchịkwa ọkpụrụkpụ jerrycans, iji jide n'aka na ọ bụ otu.E wezụga nke ahụ, anyị nwekwara ike ịgbanwe oke oke site na ụdị ọrụ njikwa!
Ọ nwere clamping efere na cylinder, linear ndu, slider, transducer ...
A na-edozi ebu na efere ahụ.Ngwa niile jide n'aka na mmegharị igwe kwụ ọtọ, kwụsiri ike na ngwa ngwa!
Ọ nwere ọrụ ihuenyo mmetụ, PLC, kọntaktị mgba ọkụ, ikuku mgbanwe, igbu oge, voltaji kwụsie ike ike, inverter wdg. Anyị nwere ike itinye, gbanwee na nyochaa oke nke kpo oku, nrụgide, oge, mkpu ... iji chịkwaa dum igwe si edinam oke site na. ihuenyo mmetụ aka.Ọ nwere asụsụ abụọ eji arụ ọrụ, Chinese na Bekee!
Ọ nwere hydraulic servo moto na mgbapụta, valvụ, mgbapụta, tank mmanụ, mmanụ nju oyi, tube ... Na-enye ike maka ihe eji arụ ọrụ, ka ọ dị ugbu a, a na-achịkwa valvụ nke nha site na nrụgide mmanụ maka ịnyefe akara ngosi dijitalụ n'ime ihe eji arụ ọrụ, iji chịkwaa omume nke ịfụ ntụtụ, clamping Ọdịdị, isi na extrusion!
2.LH-BM220L Na-akpụzi Igwe Nka na ụzụ
1 oyi akwa
2 oyi akwa
3 oyi akwa
N'ozuzu akụkụ L*W*H
Dayameta ihe nkedo isi
Ụgbọ ala moto
Mpaghara kpo oku
Ihe nrụpụta Max Extruder
380kg / h
Platform ebuli Stroke
Na-ebuli ike moto
Ike inye nri
Ihe mkpuchi hopper
16KG (Dịka ngwaahịa si arọ)
Anwụ Core Size
Dị ka ike ngwaahịa si dị
Mgbanwe ịdị arọ nke Parison
Mee 100 Points
Nha efere ebu
Oghere Efere Ebube
Olu tank mmanụ
37KW + 4KW
Nrụgide mmiri emegharịrị
Ọnụ ego mmiri emegharịrị
Nke gara aga: LH-BM10000L 1-6 Igwe mmiri mmiri na-akpụ akpụ akpụ
Osote: LH-BM1000L 1-3 N'ígwé IBC Tank na-akpụzi igwe